शीर्ष5युरोप मा वाइन शहर अनि कसरी त्यहाँ प्राप्त गर्न | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > शीर्ष5युरोप मा वाइन शहर अनि कसरी त्यहाँ प्राप्त गर्न
शीर्ष5युरोप मा वाइन शहर अनि कसरी त्यहाँ प्राप्त गर्न
ट्रेन यात्रा, ट्रेन यात्रा अस्ट्रिया, ट्रेन यात्रा फ्रान्स, ट्रेन यात्रा जर्मनी, ट्रेन यात्रा इटाली, यात्रा युरोप
पढ्ने समय:5मिनेट(Last Updated On: 17/01/2020)
हरेक साँचो रक्सी प्रेमी भनेर युरोप मा रक्सी शहर किफायती र अचम्मको रक्सी प्रस्ताव थाह. बाट इटाली फ्रान्स, र थप, यी देशहरूमा संसारमा सबै भन्दा राम्रो वाइन गर्न धेरै द्वारा पहिचान गर्दै.
अांशिक रुपमा, यो आदर्श जलवायु बढ्दै अवस्था कारण छ, तर यो अझै पनि एक कला हो. सबैले सबै भन्दा स्वादिष्ट मदिरा कसरी बनाउने थाह.
वाइन प्रेमीहरूको केही ठाउँमा कडा एक बिट रेल द्वारा पुग्न हुन् भनेर तिनीहरूले मा निहित छन् रूपमा थाहा देहात. धन्न, पश्चिमी युरोप अझै पनि तपाईं युरोप मा सबै भन्दा राम्रो वाइन प्रस्ताव धेरै शहर छ. प्लस, तपाईं तिनीहरूलाई प्राप्त गर्न एक तरिका फेला मा समस्या आफैलाई हुनेछैन, यी सबै रूपमा छन् रेल पहुँच. यदि तपाईँको सुरूवात बिन्दु युरोप मा प्रमुख देशहरूको कुनै पनि छ, तपाईं एउटा सजिलो समय त्यहाँ प्राप्त हुनेछ.
भनेर मनमा सबै, कसरी रेल द्वारा तिनीहरूलाई भ्रमण गर्न गरेको युरोप मा सबै भन्दा राम्रो रक्सी शहर को परम सूची मा एक हेरौं र.
दुर्भाग्यवश सबैलाई ज्ञात छैन, जर्मनी मा राइन नदी उपत्यका भरिएको छ गुणस्तर दाखबारी. तिनीहरूले जर्मनी को सबै भन्दा राम्रो मदिरा उत्पादन, र ती सबै भन्दा कोबलेन्ज पुग्न.
यो सानो शहर नदी मा निहित राइन र क्षेत्र मा सर्वश्रेष्ठ वाइन बारहरू र रेस्टुरेन्ट केही प्रदान गर्दछ. यसलाई विशेष सुन्दर छ, क्षेत्र केही अन्य बडा शहर मन.
क्षेत्र को दाखबारी छन् प्रसिद्ध संसारको सबै भन्दा राम्रो Riesling रक्सी भइरहेको लागि. के तपाईं कोबलेन्ज को सुंदर शहर भ्रमण गर्न चाहनुहुन्छ निर्णय भने, तपाईं चिसो सेतो रक्सी एक गिलास वा दुई प्रयास हुनेछ.
कोबलेन्ज गर्न प्राप्त एकदम सजिलो छ, यो सबै राइन उपत्यका रक्सी शहर को सबै भन्दा राम्रो स्थानहरु एक छ रूपमा. यो आधा बाटो दुई प्रमुख जर्मन शहर बीच छ - कोलोन र फ्रैंकफर्ट, र छिटो रेल कोबलेन्ज जाँदैछन् बाट दुवै. अरु के छ त, शहर अन निहित frequented राइन उपत्यका सुंदर रेल मार्ग.
अन्त मा, शहर नेदरल्यान्ड्स संग सीमाना गर्न अपेक्षाकृत नजिक छ, बेल्जियम, लक्समबर्ग, र फ्रान्स. त्यो तपाईं कुनै समस्या साथै यी देशका एक रेल फेला हुनेछ अर्थ.
बर्लिन कोबलेन्ज गाडिहरु गर्न
कोबलेन्ज गाडिहरु गर्न फ्रैंकफर्ट
लक्समबर्ग कोबलेन्ज गाडिहरु गर्न
श्टुटगार्ट कोबलेन्ज गाडिहरु गर्न
भियना बस बस्न सबै भन्दा राम्रो शहर बीच छैन; यो युरोप मा सबै भन्दा राम्रो रक्सी शहर बीच पनि छ. देश सामान्य मा रक्सी को धेरै उत्पादन, जो सबैभन्दा डेन्यूब घाटी संग दाखबारी हो. भियना नै शहर भित्र रक्सी उत्पादन गर्ने केही दुनिया क्यापिटल मध्ये एक छ.
कि सबै तपाईं सबै भन्दा राम्रो वाइन देश प्रस्ताव छ प्रयास गर्न मौका हुनेछ भन्ने हो, दायाँ भियना मा. यसबाहेक, रक्सी को एक बोतल आनंद Weissburgunder छ भन्ने थाहा हुँदैन.
भियना को राजधानी छ अस्ट्रिया र युरोप मा प्रमुख शहर को एक, तपाईं चाँडै रेल द्वारा त्यहाँ प्राप्त अर्थ. यो धेरै छिमेकी देशहरूमा जडानहरू छ कि केन्द्रिय रेल हब छ.
लागि शीर्ष हाम्रो स्पष्ट छान्ने5युरोप मा रक्सी शहर बरद छ, फ्रान्स
तपाईं यी मदिरा परिचित, फ्रान्स बरद संसारको सबैभन्दा ज्ञात रक्सी क्यापिटल मध्ये एक छ भनेर थाहा. त्यो हो किन यो युरोप मा सबै भन्दा राम्रो रक्सी शहर को सूची मा छ. यो प्रसिद्ध क्षेत्र बनेको सबै रक्सी शहर मा बग्छ आनन्द गर्न.
बरद मदिरा आफ्नो खनिज र फल टिप्पणीहरू लागि प्रसिद्ध छन्, tart फल देखि sweeter पाकेको फल गर्न. यी मदिरा पनि राम्रो उमेरअनुसार गर्न अचम्मको क्षमता. को निर्माता अक्सर धेरै दशकहरु उमेर तिनीहरूलाई छोड्न.
स्वाभाविक, तपाईं क्षेत्रको सर्वश्रेष्ठ वाइन अनुभव गर्न एक भाग्य खर्च भनेर पुरानो वाइन प्रयास छैन. त्यहाँ प्रशस्त छन् किफायती मदिरा एक असाधारण मूल्य-मूल्य अनुपात संग. तपाईं यहाँ प्रयास गर्न आवश्यक शीर्ष रक्सी लाल बरद छ.
शहर पुग्न एउटा समस्या छैन, कुनै कुरा तपाईं पश्चिमी युरोप मा स्थित हुनुहुन्छ जहाँ. अरु के छ त, रेल लाइनको सबैभन्दा बरद प्रस्ताव जाँदै उच्च गतिको रेल. तपाईं केवल फ्रान्स जहाँबाट शहर पुग्न केही घण्टा आवश्यक हुनेछ. पेरिस बाट रेल भन्दा कम मा बरद पुग्छ3घण्टा!
बरद गाडिहरु गर्न TOULOUSE
पेरिस बरद गाडिहरु गर्न
बरद गाडिहरु गर्न लियोन
बरद गाडिहरु गर्न Marseilles
फ्लोरेन्स, इटाली युरोप मा हाम्रो अन्तिम वाइन शहर छ
टस्क्यानी को jewel, यदि इटाली को सबै छैन, फ्लोरेन्स सही शहर हो देश मा सबै भन्दा राम्रो वाइन संग. त्यहाँ शहर वरिपरि सबै धेरै गाउँमा अद्भुत Sangiovese रक्सी उत्पादन र ती सबै युरोप मा रक्सी शहर को सूची मा हुन योग्य गर्न छन्. यी सुन्दर गाउँ र आश्चर्यजनक इटालियन भित्री पुग्न कठिन, तर फ्लोरेन्स शहर छैन.
तपाईं इटाली जहाँबाट रेल द्वारा शहर पुग्न सक्दैन, वा थप, जस्तै स्विट्जरल्याण्ड र फ्रान्स. त्यहाँ नियमित छन्, मिलान र रोम देखि हरेक दिन धेरै पटक जाने उच्च गतिको रेल, तर देखि पनि भेनिस. यी भ्रमणहरू दुई भन्दा कम घण्टा लिन, र तपाईं सुन्दर पहाड र इटाली को क्षेत्रहरू हेर्न मौका प्राप्त.
त्यसैले तपाईं युरोप मा रक्सी शहर रमाइलो गर्न तयार छन्? SaveATrain.com तपाईं कुनै पनि शहर प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछ युरोप, छिटो, सस्तो र एक मुस्कान संग!
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन सक्छ र बस यो ब्लग पोस्ट एउटा लिङ्क हामीलाई एक क्रेडिट दिन, वा यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fwine-cities-europe%2F%3Flang%3Dne - (को एम्बेड कोड हेर्न तल स्क्रोल)
#bestwine यूरोपेन्ट्रावेल europetravel Tranride रेल प्रशिक्षण सल्लाह रेल यात्रा ट्रेन यात्रा सल्लाह travelaustria travelfrance travelgermany यात्रा रक्सी
ट्रेन यात्रा फ्रान्स, ट्रेन यात्रा जर्मनी, ट्रेन यात्रा इटाली, ट्रेन यात्रा यूके, यात्रा युरोप
4 तपाईंको इन्स्टाग्राम शाइन बनाउन ट्रेन दृश्य
ट्रेन यात्रा, ट्रेन यात्रा नर्वे, ट्रेन यात्रा स्कटल्याण्ड, ट्रेन यात्रा स्वीडेन, ट्रेन यात्रा स्विजरल्याण्ड, ट्रेन यात्रा सल्लाह, यात्रा युरोप
ट्रेन यात्रा अस्ट्रिया, ट्रेन यात्रा फ्रान्स, ट्रेन यात्रा जर्मनी, ट्रेन यात्रा हंगेरी, ट्रेन यात्रा इटाली, ट्रेन यात्रा सल्लाह, यात्रा युरोप